January | 2020 | Radio Himilo
Man United oo xiriir la sameyn karta Ivan Rakitic
Mahad Mohamed January 30, 2020
Himilo – Manchester United ayaa la soo warinayaa inay xiiseynayso saxiixa khadka dhexe ee Barcelona Ivan Rakitic kahor dhammaadka suuq furanka bishan. Xilli United ay soo gabagabeysay heshiiska Bruno Fernandes oo kaga soo biiraya Sporting Lisbon, waxaa soo baxaya warar ...
Maqal- Barnaamijka Raadreeb
Casharka Abuu Shujaac: Darsiga 72aad
Arsenal oo diyaar u ah inay la soo wareegto Pablo Mari
Mahad Mohamed January 29, 2020
Himilo – Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran tahay saxiixa daafaca Flamengo ee Pablo Mari oo ay kula soo wareegayso heshiis ammaah ah. Cayaaryahanka reer Spain ayaa dhawaan u safray England iyada oo loo arkay in uu ...
Himilo – Dalka Hindiya waxaa ku nool carruur badan oo la dhibtoonaya nafaqa-darro. 40% dadka dalkan waxaa la sheegaa inay dayacaan wax soo-saarka cuntada. Si kastaba tiro badan oo carruur ah ayaa ku dayacan waddooyinka dalkaasi, balse nasiib wanaag qaar ...
Ogow wakhtiga aadan la sheekeysan karin shaqaalaha diyaarada
Himilo – Shaqaalaha diyaarada ayaa shaqeeya saacado dhaadheer si ay uga jawaabaan baahida iyo adeegga rakaabka iyaga oo inta badan dhoolla-caddeeya. Sida uu qoray bogga Quora, Anna McVeigh oo horay shaqaale uga soo noqotay shirkado caalami ah ayaa tilmaamtay in ...
Bayern Munich oo wali isha ku heysa Leroy Sane
Himilo – Madaxa fulinta Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge ayaa tilmaamay in kooxda reer Jarmal la xiriiri karto Manchester City sabab ku saabsan heshiiska Leroy Sane. Inkasta oo uusan ka soo muuqan kulamo tan iyo bishii August sabab ku qotonta dhaawac ...
Casharka Abuu Shujaac: Darsiga 71aad
Jabaan oo maxkamadeynaysa boostoole aan 24,000 farriin gaarsiin dadka ay ku socotay
Himilo – Nin u dhashay Jabaan oo horay uga shaqeyn jiray boosto ayaa laga yaabaa in uu wajaho maxkamad iyada oo loo heysto mas’uuliyadda ah in uusan kumanaan farriimo ah gaarsiinin dadkii ay ku socotay. Wargeyska The Guardian ayaa qoray ...
Barcelona oo ka rajo dhigtay saxiixa Pierre-Emerick Aubameyang
Mahad Mohamed January 28, 2020
Himilo – Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay muujineyso dadaal ay ku heysanayso cayaaryahanka Pierre-Emerick Aubameyang oo ay dooneyso in uu sii joogo garoonka Emirates Stadium. 30 jirka ayaa si weyn loola xiriiriyay u dhaqaaqista kooxda Barcelona kaddib markii la ...